काठमाण्डौ । आरटीजीएस प्रणाली आउँदो आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन पनि सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना गर्दै आउँदो आइतबार (जेठ ८ गते) आरटीजीएस प्रणाली सुचारु हुने जानकारी गराएको हो। विकास ऋणपत्र २०८७ ‘ख’ को छैटौँ किस्ताको अर्धवार्षिक ब्याज भुक्तानीका लागि आइतबार आरटीजीएस सुचारु रहने सूचनामा जानकारी गराइएको...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८१ ‘ङ’ जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ ६ गते २ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र भोलि जेठ ५ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ। यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली...
डलरको तुलनामा कमजोर बन्दै नेपाली रुपैयाँ, विनिमय दर हालसम्मकै उच्च
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बुधबार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि १ अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२४.४१ रुपैयाँ तोकेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत मंगलबार (वैशाख २७ मा) १२३.४४ रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसअघि गत फागुन २४ मा १ अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२३.४४ रुपैयाँ र २०७७ वैशाख १० मा १२३.२४...
बिटक्वाइनबारे छलफल गर्न राष्ट्र बैंकको टोली एल साल्भाडोरमा
काठमाण्डौ । बिटक्वाइनका बारेमा छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एक टोली एल साल्भाडोर पुगेको छ। विश्वभरका ४४ मुलुकका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय अधिकारीबीच सेल्ट्रल अमेरिकी राष्ट्र एल साल्भाडोरमा वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल इकोनोमीका साथै बिटक्वाइनका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। एल साल्भाडोरका ४३ औँ राष्ट्रपति नयिब बुकेलेका अनुसार...
जेठ १ गते आरटीजीएस प्रणाली सुरु रहने
काठमाण्डौ । जेठ १ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गरी आउँदो आइतबार आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने जानकारी गराएको हो। विकास ऋणपत्र २०८३ ‘ख’ को छैटौँ किस्ताको अर्धवार्षिक ब्याज भुक्तानीका लागि आउँदो आइतबार आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने राष्ट्र बैंकले...
जेठ ३ मा राष्ट्र बैंकले रु. १३.७४ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि वैशाख २९ गते (बिहीबार ) १३ अर्ब १८ करोड ५ लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ ३ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि बिहीबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो...
महँगी ह्वात्तै बढ्यो, व्यापार घाटा रु. १३ खर्ब नाघ्यो
काठमाण्डौ । देशमा मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ७.१४ प्रतिशत पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही महिनाको तुलनामा सतप्रतिशतभन्दा बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही...
जेठबाट बैंकहरुमा पनि हप्तामा २ दिन बिदा, सेवा प्रवाह गर्ने समय थपियो
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था शनिबार र आइतबार सार्वजनिक दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरको आज (वैशाख २८ गते)को स्वीकृतिबमोजिमा बैंकमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। दसैँ र तिहारका सार्वजनिक बिदाबाहेक अन्य बिदा लगातार दुई दिनभन्दा बढी भएमा तेस्रो...
अब राष्ट्र बैंकले निवृत्तिभरणबापतको रकम बैंक खातामा मात्र भुक्तानी गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण भुक्तानी बैंक खाताबाट गर्ने भएको छ। निवृत्तिभरण भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम बैंकहरुबाट मात्र भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गर्दै जनाएको छ। त्यसैले सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई एक महिनाभित्र खाता खोलिसक्न र सोको विवरण राष्ट्र...
रु. २०.१८ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि वैशाख २८ गते (सोमबार) २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले वैशाख २७ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ। यो ट्रेजरी बिल...
आरटीजीएस प्रणाली शनिबार पनि सुचारु रहने
काठमाण्डौ । आरटीजीएस प्रणाली भोलि शनिबार पनि सुचारु रहने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै भोलि शनिबार पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने जानकारी गराएको हो। आरटीजीएस प्रणाली विकास ऋणपत्र २०८२ ‘ख’ को नवौँ किस्ताको अर्धार्षिक ब्याज भुक्तानी लागि सुचारु रहने सूचनामा उल्लेख छ। भोलि आरटीजीएस प्रणाली बिहान १०...
मनिचेन्जर कारोबार गर्न कति चाहिन्छ चुक्तापुँजी ? कति राख्नुपर्छ धरौटी ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिचेन्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कम्पनीहरुका लागि चुक्तापँुजीको सीमा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ संशोधन गर्दै चुक्तापुँजीको सीमा तोकेको हो। जसअनुसार भारतीय रुपैयाँको खरिदबिक्री कारोबारका लागि १९ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्नेछ।...
अब क्रेडिट कार्डमार्फत वालेटमा रकम लोड गरी विद्युतीय भुक्तानी गर्न पाइने
काठमाण्डौ । अब क्रेडिट कार्डमार्फत वालेट लोड गरी वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संशोधन तथा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार अब क्रेडिट कार्डमार्फत वाटेलमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीका लागि प्रयोग...
राष्ट्र बैंकले रु. १९.१० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने, आज बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज वैशाख १९ गते १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले भोलि वैशाख २० गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो...
गभर्नर अधिकारीको पक्षमा फैसला, बिनाआधार छानबिन गर्न नपाउने
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले शुक्रबार गभर्नर अधिकारीको रिट सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सरकारले आधार कारण बिना गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय...